သင်သိဖို့လိုအပ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်များ
လောကမှာ သိဖို့အခက်ဆုံးက စိတ်ပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုတော့ သိပါတယ် နိုင်ပါတယ် လို့ ထင်နေတာလား မဟုတ်ပါဘူ။ တခါတလေမှာ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲသလို စိတ်ကို မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါ တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မသိလိုက်ပဲ စိတ်ကို လှည့်စားခံလိုက်ရတာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။
ကဲစိတ်ပိုင်းဆိုင် လှည့်ကွက်လေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
၁. ကျောက်တုံး၊ ကတ်ကြေး၊ စက္ကူ ကစားနည်းမှာ အနိုင်ရဖို့
ကျောက်တုံး၊ ကတ်ကြေး၊ စက္ကူ ကစားနည်းမှာ နိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကစာနည်းကို မကစားခင်မှာ တစ်ဖက်လူကို ကြုံရာမေးခွန်း တစ်ခုမေးလိုက်ပါ။ ဒီလိုမေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ဖက်လူကို စိတ်ရှုပ်ထွေး သွားစေပြီး ကတ်ကြေးကိုသာ သူရွေးချယ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Recommended for you - ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လွယ်ပါတယ်တဲ့လား!!!
၂. သင့်ကို မှတ်မိပြီး လူချစ်လူခင်များစေဖို့
တခြားသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ သင့်ကို မှတ်မိစေချင်ပြီး လူချစ်လူခင်များချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့အဆက် အသွယ်လုပ်နေရတဲ့ လူတွေရဲ့ နာမည်တွေကို အပြည့်အစုံမဟုတ်ရင်တောင် တစ်လုံးလောက်ဖြစ်ဖြစ် မှတ်ထားပြီး တွေ့တိုင်းနာမည်လေး ခေါ်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။
၃. ရန်သူနဲ့ အနီးဆုံးမှာနေပါ။
ကိုယ်နဲ့ သဘောထားချင်းမတူသူ ကိုယ့်ကိုအမြဲလိုလို တိုက်ခိုက်တတ်သူနဲ့ အစည်းအဝးခန်းထဲမှာ တွေ့လို့ ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ စဉ်းစားရကြပ်နေလား။ ဘေးချင်းကပ်သာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပါ။ သူ့မျက်စိရှေ့မှာ ရှိနေမယ် ဆိုရင် ဆွေးနွေးမှုတွေက သင့်ဆီဦးတည်နေပြီး အကြပ်ရိုက်စေမယ့် မေးခွန်းတွေမေးဖို့ အခွင့်အရေးပေး သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူ့ဘေးနားမှာ ထိုင်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း စိတ်ကသိက အောက် မဖြစ်ပါနဲ့။ သူလဲ သင့်လိုပဲ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်နေလို့ ရန်ရှာဖို့ မေ့နေမှာပါ။
Recommended for you - အိပ်ယာမသိမ်းသင့်ဘူးလို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောပြီ
၄. ပူပင်သောကတွေကို ချရေးပါ။
ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် စိတ်စွမ်းအင်က အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက် အဓိကအကျဆုံး အရာတစ်ခုပါ။ ပူပင်သောကတွေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက သင့်ရဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေကို ဝါးမြိုလိုက်ပြီဆိုရင် စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ် ချရေးလိုက်ပါ။ ဒါကလည်း ရင်ဖွင့်နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီလိုတွေ ချရေးလိုက်တဲ့အခါ သင်စိတ်ပေါ့ပါးသွား ပါလိမ့်မယ်။
Source; Myanmar leaders
လောကမှာ သိဖို့အခကျဆုံးက စိတျပါပဲ။ ကိုယျ့စိတျကိုတော့ သိပါတယျ နိုငျပါတယျ လို့ ထငျနတောလား မဟုတျပါဘူ။ တခါတလမှော စိတျကို ထိနျးခြုပျဖို့ခကျခဲသလို စိတျကို မွငျအောငျကွညျ့ဖို့လညျး ခကျခဲပါ တယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတောငျ မသိလိုကျပဲ စိတျကို လှညျ့စားခံလိုကျရတာမြိုး ကွုံဖူးပါသလား။
ကဲစိတျပိုငျးဆိုငျ လှညျ့ကှကျလေးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
၁. ကြောကျတုံး၊ ကတျကွေး၊ စက်ကူ ကစားနညျးမှာ အနိုငျရဖို့
ကြောကျတုံး၊ ကတျကွေး၊ စက်ကူ ကစားနညျးမှာ နိုငျခငျြတယျဆိုရငျ ဒီကစာနညျးကို မကစားခငျမှာ တဈဖကျလူကို ကွုံရာမေးခှနျး တဈခုမေးလိုကျပါ။ ဒီလိုမေးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ တဈဖကျလူကို စိတျရှုပျထှေး သှားစပွေီး ကတျကွေးကိုသာ သူရှေးခယျြတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Recommended for you - ကြောငျးဆရာတဈယောကျဖွဈဖို့ လှယျပါတယျတဲ့လား!!!
၂. သငျ့ကို မှတျမိပွီး လူခဈြလူခငျမြားစဖေို့
တခွားသူတှရေဲ့စိတျထဲမှာ သငျ့ကို မှတျမိစခေငျြပွီး လူခဈြလူခငျမြားခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျနဲ့အဆကျ အသှယျလုပျနရေတဲ့ လူတှရေဲ့ နာမညျတှကေို အပွညျ့အစုံမဟုတျရငျတောငျ တဈလုံးလောကျဖွဈဖွဈ မှတျထားပွီး တှတေို့ငျးနာမညျလေး ချေါပွီး နှုတျဆကျလိုကျပါ။
၃. ရနျသူနဲ့ အနီးဆုံးမှာနပေါ။
ကိုယျနဲ့ သဘောထားခငျြးမတူသူ ကိုယျ့ကိုအမွဲလိုလို တိုကျခိုကျတတျသူနဲ့ အစညျးအဝးခနျးထဲမှာ တှလေို့ ဘယျလိုရှောငျရမလဲ စဉျးစားရကွပျနလေား။ ဘေးခငျြးကပျသာ ဝငျထိုငျလိုကျပါ။ သူ့မကျြစိရှမှေ့ာ ရှိနမေယျ ဆိုရငျ ဆှေးနှေးမှုတှကေ သငျ့ဆီဦးတညျနပွေီး အကွပျရိုကျစမေယျ့ မေးခှနျးတှမေေးဖို့ အခှငျ့အရေးပေး သလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ သူ့ဘေးနားမှာ ထိုငျရတာ အဆငျမပွဖွေဈတဲ့အတှကျလညျး စိတျကသိက အောကျ မဖွဈပါနဲ့။ သူလဲ သငျ့လိုပဲ စိတျကသိကအောကျဖွဈနလေို့ ရနျရှာဖို့ မနေ့မှောပါ။
Recommended for you - အိပျယာမသိမျးသငျ့ဘူးလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှပွေောပွီ
၄. ပူပငျသောကတှကေို ခရြေးပါ။
ဘာအလုပျပဲလုပျလုပျ စိတျစှမျးအငျက အလုပျပွီးမွောကျဖို့အတှကျ အဓိကအကဆြုံး အရာတဈခုပါ။ ပူပငျသောကတှေ စိတျဖိစီးမှုတှကေ သငျ့ရဲ့ စိတျစှမျးအငျတှကေို ဝါးမွိုလိုကျပွီဆိုရငျ စာရှကျတဈရှကျပျေါ ခရြေးလိုကျပါ။ ဒါကလညျး ရငျဖှငျ့နညျးတဈမြိုးပါပဲ။ ဒီလိုတှေ ခရြေးလိုကျတဲ့အခါ သငျစိတျပေါ့ပါးသှား ပါလိမျ့မယျ။
Read times Last modified on Monday, 30 December 2019 15:32